Aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in ay dhabarbaaxo kulul u geysteen Al-qaacidda – SBC
Aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in ay dhabarbaaxo kulul u geysteen Al-qaacidda
Washington:- Mas’uul u hadlay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka mareykanka ayaa xaqiijiyey dilka ninka labaad ee ururka Al-qaacidda ee lagu magacaabo Abuu Yaxya Al-liibiyi kadib Weerar Diyaaaradaha Maraykanku nooca aan cidna wadin ku qaadeen Pakistan.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa mas’uuliyiin katirsan sirdoonka dalka Pakistan ayaa marsii horeysay sheegtay in Abuu Yaxye Al-liibiyi oo ah ninka labaad ee ururka Al-qaacidda laga yaabo in uu kudhintay weerar diyaaradaha mareykanka ku qaadeen woqooyi galbeed dalka Pakistan.
Masuul ka mid ah masuuliyiinta Mareeykanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in weerarkii Shalay ka dhacay Baakistaan ay ku dhinteen 12-qof oo uu ku jiro Abuu Yaxya Al-Liibi.
Masuulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haddii ay xaqiiq noqto inuu weerarkaas ku dhintay Abuu Yaxya Al-Liibi ay dharbaaxo kulul ku dhacday Al-qaacida.
Abuu Yaxya Al-Liibi oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ah nin aad u firfircoon oo Al-Qaacida waxtarkeeda ka mid ah, waxaana lagu sheegaa ninka xagga fataawida u qaabilsan ururka Al-Qaacida.
Haddii warkan xaqiiqo noqdo, waxa ay noqoneysaa nabar ku dhacay urur weynaha Al-Qaacida ee dagaalka kula jira Mareykanka iyo xulufadiisa, iyadoona sanad uun laga joogo markii hoggaamiyihii Al-Qaacida Sh Usama Bin-Ladin lagu dilay Pakistan.
ilo ka mid ah Masuuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Abuu Yaxya uu yahay nin Diinta ku xeeldheer islamarkaasna darajo sare ka gaaray Cilmiga Kiimikada, waxa uu dhowr mar ka badbaaday weeraro ay fuliyeen Diyaaradaha Mareeykanka.
Abuu Yaxya Al-Liibi Magaciisa dhabta ah waa “Maxamed Xasan Qaa’id” wanaa hoggaamiyaha labaad ee Al-qaacida marka laga yimaado dhaqtar Ayman Al-sawaahiri oo jagadaan la wareegay kaddib dilkii Usaama Bin Laden.